जब पेट भारी हुन्छ - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeस्वास्थ्यजब पेट भारी हुन्छ
आम नेपालीको समस्या हो, ग्याष्ट्रिक । खासगरी खानपानको सही तरिका अपनाउन नसक्दा वा खाने तालिका नियमित हुन नसक्दा ग्याष्ट्रिकको समस्या हुन्छ । ग्याष्ट्रिक मात्र होइन, धेरैजसो कुनै न कुनै किसिमको पेटको समस्याले ग्रसित हुन्छन् । आखिर के कारणले पेटको समस्या हुन्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ?
सही ढंगले चपाउने
खाना खाने क्रममा हामीले सबैभन्दा बढी बेवास्ता गर्ने कुरा हो, खाना चपाउने । पोषिलो, ताजा खाना खाएर मात्र स्वास्थ भइदैन । स्वस्थ हुनका लागि सही तरिकाले खान पनि जरुरी छ । यसको पहिलो सर्त हो, सही ढंगले चपाउनु ।
मुखमा खानेकुरालाई खेलाएर, राम्ररी चपाएपछि मात्र निल्नुपर्छ । अर्थात ठोस खानेकुरालाई चपाएर नरम, रसिलो बनाएर मात्र निल्नुपर्छ । यसरी निल्दा पाचन प्रक्रियामा सहज हुन्छ । भनिन्छ नि, हाम्रो ३२ वटा दाँत हुन्छ र कुनैपनि खानेकुरा मुखमा ३२ पटक नै चपाउनुपर्छ । यसको अर्थ खानेकुरालाई मिहिन ढंगले चपाउनुपर्छ ।
तर, अहिले हामीलाई हतार छ । खानेकुरा राम्ररी चपाएर खाने गर्दैनौं । हतार हतार निल्ने गर्छौं । पोषणविद्हरुका अनुसार कुनैपनि खानेकुरा खाँदा त्यसमा पूर्णत ध्यान दिनु जरुरी छ । खाना खाइरहेको बेला अन्यत्र ध्यान दिनु हुँदैन । खानालाई विस्तारै, आरमपूर्वक, स्वाद लिएर खानुपर्छ । यसरी खानेकुरा सेवन गर्दा पेट वा पाचन सम्बन्धी समस्या हुँदैन ।
भोक भन्दा धेरै नखाऔं
हाम्रो प्रवृृत्ति के हुन्छ भने मीठो मसिनो खानेकुरा छ भने आवश्यक्ताभन्दा बढी खाने । धेरैजसो अवस्थामा हामी भोक लागेको भन्दा बढी खान्छौं । एकै पटक धेरै खानेकुरा खाँदा पाचन प्रक्रियामा असर गर्छ । खानेकुरा राम्ररी पच्दैन । पेटको समस्या हुन्छ । त्यसैगरी आयुर्वेदका अनुसार दुई भोजनको बीचमा कम्तीमा पाँच घण्टाको अन्तरमा मात्र खानेकुरा खानुपर्छ । अर्थात पहिलो पटक खाएको खानेकुरा राम्ररी पचिसकेपछि मात्र अर्को खाना खानुपर्छ ।
कृतिम गुलियोबाट बच्नुपर्छ
अहिले हामीलाई थरीथरीका परिकार खाने बानी परेको छ । बजारमा पनि यस्ता मिठाई प्रशस्त पाइन्छन् । जबकी यस किसिमको कृतिम मिठाईले पनि पाचनमा असर गर्छ ।
ग्यास कम गरौं
केरा वा अन्य कार्बनेटेड ड्रिंकले शरीरमा ग्यास भर्छ । कार्बनेटेड ड्रिंकको साटोमा ताजा फलफूलको रस, सर्वत, दही, मोही आदि एकदमै उपयोगी हुन्छ ।
Previous articleसरकारी डाक्टरले निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउने कार्यविधि लागू गरिंदै
Next articleकेन्द्रीय पदाधिकारीको हस्ताक्षर जुटाउन महन्थ ठाकुरले मागे थप एक साता